Air Care Campaign for Febuary & March 2020 – Toyota Mingalar
ကားအတွင်းခန်း၌ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော လေအေး၊လေသန့်ကို ရရှိ စေရန်အတွက် Toyota Air Care အသုံးပြု၍ Evaporator ကို ပုံမှန်သန့်စင်ပေးရန် အရေးကြီးပါသည်။ ယာဉ်မောင်းနှင်သည့်အခါ Evaporator ထဲသို့ လေများ ဝင်ရောက်လာပြီးဖုန်မှုန့်၊ အခြားအမှိုက်အစအနများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်မှ အမှုန်အမွှားများသည် Evaporator တွင် တင်ကျန်လာပါသည်။ အချိန်ကြာလာသောအခါ ဘက်တီးရီးယားများနှင့် မှိုများ စုပုံလာပြီးယာဉ်၏အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာနိုင်ခြင်းကြောင့် အနံ့အသက်မကောင်းခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး ယာဉ်ပေါ်လိုက်ပါ စီးနင်းသူများကို ကားမူးခြင်းနှင့် နာမကျန်းခြင်းများ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
Toyota Air Care ဝန်ဆောင်မှုနှင့် သမားရိုးကျ Aircon ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအကြား ခြားနားချက်များမှာ သမားရိုးကျ Aircon ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် Evaporator ကို သန့်စင်ရန်အတွက် Dashboard တစ်ခုလုံးဖြုတ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးစီးရန် ၄၈ နာရီ ခန့်အချိန်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သလို လူအင်အားအသုံးပြုရသည့်အတွက်လည်း ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားမည် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် အပြည့်အဝထိရောက်မှုမရှိသလို Evaporator ကို အလုံးစုံ ဖြုတ်ပြီး သန့်စင်ခြင်းသည် ခက်ခဲရှုပ်ထွေးပြီး ဝါယာကြိုးများ ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းနှင့် Dashboard တွင် ခြစ်ရာ၊စင်းရာများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ Evaporator သန့်စင်ပြီး ပြန်လည်တပ်ဆင်ရာတွင်လည်း စနစ်မကျခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကာ ကားမောင်းနေစဉ် တုန်ခါမှုများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။
Toyota Air Care ဝန်ဆောင်မှုသည် ဆန်းသစ်ပြောင်းလဲတိုးတက်လာသော Aircon သန့်စင်ခြင်းနည်းပညာကို အသုံးပြုထားသဖြင့် Dashboard ဖြုတ်စရာမလိုဘဲ Aircon ကို သန့်စင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ စုပြုံ လာသော ဘက်တီးရီးယား၊ မှိုနှင့် အညစ်အကြေးများကို ထိ ရောက်စွာ ဖယ်ထုတ်ပေးနိုင်သဖြင့် ကားအတွင်းခန်း၌ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ပြီး ကျန်းမာသော လေကောင်း၊လေသန့်များကိုရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Toyota Air Care သည် Toyota ၏ အရည်အသွေးမြင့် ဝန်ဆောင်မှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ခြင်း နှင့် Toyota အတွက် အထူးသီးသန့်ထုတ်လုပ်ထားသော စက်ပစ္စည်းကိရိယာဖြစ်ခြင်း စသည့်အားသာချက်များ ရှိသဖြင့် Toyota ယာဉ်ပိုင်ရှင်တိုင်း ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်သင့်သည့် Service တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Toyota Air Care Aircon Service ပြုလုပ်လိုပါက Toyota Service Center များတွင် ဖေဖော်ဝါရီလမှ မတ်လအတွင်း ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်း၍ ရယူနိုင်ပြီး မေတ္တာလက်ဆောင်ပစ္စည်းများလည်း ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါသည်။(မေတ္တာလက်ဆောင်မှာ ပစ္စည်းလက်ကျန်အတွင်းသာ)။
အမှတ် (၂၃၆)၊ အလုံလမ်း၊ အလုံမြို့နယ်
Hotline: (09) 9405399993
ဖုန်း 01 – 221224 ၊ 01 – 2302122 ၊ 01 – 2302123 ၊ 01 – 2302126 သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင့်။
Toyota Air Care Service for fresh journey
To maintainahealthy environment in your car, it is important to have the evaporator checked and clean regularly by Toyota Air Care. Air is drawn into the evaporator when the vehicles is in motion. Environmental particles like dust, pollen and other debris are deposited onto the evaporator. Over time, bacteria and mould can multiply and enterthe vehicle’s cabin, causing unpleasant odour and potential illness to the occupants.
There’s the difference between conventional Air-con servicing and Toyota Air Careservicing. Conventional Air-con servicing involves dismantling the entire dashboard to have the access to the evaporator. Work takes up to 48 hours to complete. Moreover, manpower intensive means services is costly. Next, it may not be fully effective and overhauling the evaporator isacomplicated process, which risks damaging the delicate wiring and scratching you car’s interior. It may also result in parts not being properly reassembled and vibrating during driving. Toyota Air Care is with revolutionary Air-Con Cleaning, using state-of-the-art tools, Toyota Air Care cleans your car’s air-con unit without having to dismantle the dashboard. It eliminate bacteria, mould and impurities that may have accumulated
over time, giving you fresh and healthy air for every journey effectively. Toyota Air Care is the service that should use because it is part of Toyota Quality Service and specialized cleaning equipment exclusive to Toyota, Please book your servicing and ask for Toyota Air Care at Toyota Service and get the gift items (While stock last).
No (236), Ahlone Road, Ahlone Township,Yangon.
Ph – 01 – 221224 ၊ 01 – 2302122 ၊ 01 – 2302123 ၊ 01 – 2302126
#toyota #toyotamingalar #service #aircare #aircon